I-Arsenal ne-Spurs bazotholana enkundleni enabalandeli | Scrolla Izindaba
I-Arsenal ne-Spurs bazotholana enkundleni enabalandeli
Lapho izimbangi ezibabayo i-Arsenal ne-Tottenham Hotspur bengena enkundleni ngomdlalo wabo wase-North London derby ngeSonto, bazothokoziswa ngababukeli – yize kuzoba nabayi-2 000 kuphela enkundleni yezemidlalo.
Ngokwemibiko i-derby izobona abalandeli bebuyela enkundleni okokuqala kusukela ngoNdasa noHulumeni ekhulula imigomo kancane.
Umqeqeshi we-Arsenal uMikel Arteta kumele ngabe akalali ebusuku efuna izindlela zokunqanda ama-Spurs angenaluzwela nokushaya amagoli mahhala.
Lesi mhlawumbe yisikhathi esinzima kunazo zonke sezinyanga eziyi-12 zikaArteta ku-Arsenal. I-Gunners isendaweni ye-14 ku-Premier League njengoba isishaye amagoli amahlanu kuphela emidlalweni yabo eyisishiyagalombili edlule yeligi.
Bagcine ukunqoba umdlalo weligi esikhathini esingangenyanga esedlule ngesikhathi beshaya i-Manchester United ngegoli elilodwa eqandeni ekuhambeni. Ngemuva kwalokho kube wukuhlulwa ngamagoli amathathu eqandeni bedlala ekhaya ezandleni ze-Aston Villa, ukubambezeleka kwe-Leeds United nokunye ukuhlulwa (ngamagoli amabili kwelilodwa) ekhaya yi-Wolverhampton Wanderers ngeSonto eledlule.
Ifomu labo elidumazayo kule sizini seliholele ekutheni abanye bazibuze ukuthi ingakanani inqubekela phambili abayenzile selokhu uArteta angena esikhundleni sikaUnai Emery. Ngakolunye uhlangothi i-Spurs ijabulela ifomu ecebile ngaphansi komqeqeshi uJose Mourinho.
Njengamanje bahlanganyela isikhundla esiphezulu nompetha beligi i-Liverpool. omabili la mawembu anamaphuzu angama-21 ngemuva kwemidlalo eyishumi kodwa i-Spurs isendaweni yokuqala ngomehluko wamagoli. I-Spurs ibelokhu ikhombisa ukuthi ingaba namandla okubalwa nabo futhi balungele imincintiswano yase-Europe futhi bangasho ngokufanele ukuthi babizwa ngelinye lamaqembu aphezulu eNgilandi.
Kule sizini i-Spurs idlale ngokulingana ne-Chelsea (ngeqanda eqandeni), bashaya i-Manchester City (ngamagoli amabili eqandeni) baphinde bashaya i-Manchester United (ngamagoli ayisithupha kwelilodwa).
Ngama-Gunners alandelayo kulayini wokudubula, akekho ongasola uArteta ngokungalali ebusuku.
Umdlalo uzoqala enkundleni yezemidlalo iTottenham Hotspur ngo-6.30 ntambama ngeSonto.
Eminye imidlalo ye-English Premier League
NgoMgqibelo: i-Burnely izodlala ne-Everton (e-Turf Moore, ngo-2.30 pm); I-Manchester City izodlala ne-Fulham (e-Etihad Stadium, ngo-5pm); i-West Ham United izodlala ne-Manchester United (e-London Stadium, ngo-7.30pm); I-Chelsea izodlala ne-Leeds United (e-Stamford Bridge, ngo-10pm)
NgeSonto: West Brom izodlala ne-Crystal Palace (e-The Hawthorns, ngo-2pm); I-Sheffield United izodlala ne-Leicester City (e-Bramall Lane, ngo-4.15pm); I-Liverpool izodlala ne-Wolverhampton Wanderers (e-Anfield, ngo-9.15pm)
I-Brighton izodlala ne-Southampton (e-American Express Community Stadium, ngo-10pm)